मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2018-03 > केवल शब्दहरू
गीतहरू शब्दबिना के हुन्छन्? संगीतकार शुबर्ट र मेन्डेलसोहनले "शब्द बिना गीतहरू" ठूलो संख्यामा लेखेका छन्, तर मलाई ती विशेष कुनै सम्झना छैन। हाम्रा सेवाहरू शब्दबिना के हुन्छन्? जब हामी नयाँ गीतहरू गाउँदछौं, हामी शब्दहरूमा ध्यान दिएर ध्यान दिन्छौं, यदि धुन यति आकर्षक छैन भने पनि। प्रख्यात भाषणहरू, चल्ती प्रवचनहरू, उत्कृष्ट साहित्यहरू, प्रेरणादायक कविता, यहाँसम्म कि यात्रा मार्गनिर्देशकहरू, जासूसी कथाहरू र परीकथा सबैको एक साझा समान हुन्छ: शब्दहरू। येशू, सबै मानिसजातिको अद्भुत उद्धारकर्ता, "लोगो" वा "वचन" शीर्षक राख्नुहुन्छ। इसाईहरूले बाइबललाई परमेश्वरको वचन भनेर सम्बोधन गर्छन्।
जब हामी सृष्टि गरिएका थियौं, हामी मानिसहरूलाई भाषा दिइयो। ईश्वरले आदम र हव्वालाई सिधा कुरा गर्नुभयो र निस्सन्देह तिनीहरू एक अर्कासँग कुरा गरे। शैतानले हव्वाको मुटुलाई असर गर्न लोभ्याउने शब्दहरू प्रयोग गर्यो र त्यसले आदमलाई थोरै परिमार्जन गरिएको संस्करणमा दोहोर्‍यायो। कमसेकम भन्न नतिजा विपत्तिजनक थियो।
बाढी पछि सबै मानिसहरूले एकै भाषा बोल्थे। टावरको योजना बनाउन मौखिक संचार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो, जुन "आकाशमा पुग्ने" थियो। तर यो योजना पृथ्वीलाई वृद्धि गर्ने र जनसंख्या दिने परमेश्वरको आज्ञाको सीधा विरोधाभास थियो र त्यसैले उनले "प्रगति" लाई अन्त्य गर्ने निर्णय गरे। उसले कसरी गरे? उहाँले तिनीहरूको भाषा गोलमाल गर्नुभयो, उनीहरूलाई एक अर्काको शब्दहरू बुझ्न असम्भव बनायो।
तर नयाँ करारसँगै एउटा नयाँ सुरुवात भयो। चाडपर्व मनाउन विभिन्न देशका मानिसहरूका धेरै समूह यरूशलेम आए र पेन्टेकोस्टमा भेला भए। त्यो चाड येशूको क्रूसमा टाँगिएको र पुनरुत्थान भएको लगत्तै भएको थियो। त्यस दिन पत्रुसको भाषण सुनेको सबैले उनलाई आफ्नै भाषामा सुसमाचार प्रचार गरेको सुनेर छक्क परे! चाहे चमत्कार सुन्दै थियो वा बोल्दै थियो, भाषा अवरोध हटाईयो। तीन हजार व्यक्ति पश्चात्ताप र क्षमा अनुभव गर्न पर्याप्त बुझ्थे। त्यो त्यतिबेला चर्च सुरु भएको थियो।
जेम्सको पत्रको जिब्रोको बारेमा धेरै कुरा छ। जेम्सले यसलाई स्पार्कसँग दाँज्न सक्छन् जुन पूरै जंगलमा आगो लगाउनको लागि पर्याप्त छ। हामी यो दक्षिण अफ्रिकामा राम्ररी जान्दछौं! सामाजिक मिडियामा केहि घृणित शब्दहरूले शब्दहरूको युद्धलाई निम्त्याउन सक्छ जसले घृणा, हिंसा र दुश्मनी पैदा गर्दछ।
प्रार्थनामा हामी हामी प्रेम मा सत्य मा पारित गर्न भन्न सक्छौं। प्रेम कहिलेकाँही "कठोर प्रेम" हुन सक्छ जब यो बोल्नु आवश्यक छैन। यसको मतलब अरूमा पार्ने प्रभावलाई विचार गर्नु र सही शब्दहरू खोज्नु पनि हो।
म सानो छँदा मलाई यो राम्रोसँग याद छ, र मेरो बुबाले मलाई भन्नुभयो: "मसँग तपाईंसँग कुरा गर्न शब्द छ।" यसको मतलब केवल एक हप्काइ पछ्याउन सक्छ, तर जब उसले करायो "के तपाईसंग शब्दहरू छन्!" यसको अर्थ प्राय: राम्रो हुन्छ।